Zach King, eze nke Instagram na Vine, na-ekpughe ihe nzuzo ya kacha mma | Akụkọ akụrụngwa
Zach King, eze nke Instagram na Vine, na-ekpughe ihe nzuzo ya kacha mma
Pablo Ortega | | General, Noticias, Netwọk mmekọrịta
Enwere m mmasị izute ndị Fans m si n'akụkụ ụwa niile! ? Ekele dịrị ndị Chile maka ịtụnanya n'izu a !!!
Vidiyo nke Zach King zitere (@zachking) na Jun 19, 2015 na 6: 09am PDT
Nyaahụ anyị nwere ohere ịmara Zach King, onye America na-eto eto nke jisiri ike merie netwọkụ mmekọrịta na obere oge. Anyị kwenyesiri ike na n'oge ụfọdụ ị ga-ahụ vidio dị egwu nke ya na Instagram, Facebook ma ọ bụ Vine. Eze, makwaara dị ka "Ikpeazụ Cut King", na-agbakwunye nde mmadụ 4.8 na Instagram Ma ọ bụ kpakpando nke rụrụ ọrụ na ihe omume dị iche iche dị ka ememe Oscars ikpeazụ ma nwee ike ịga ụwa niile.
Anyị gara ụlọ ahịa AT & T na West Hollywood (Los Angeles) gaa gwa Zach King okwu ma mụta ụfọdụ ihe nzuzo ya. King tolitere na steeti Oregon ma cheta, na-amụmụ ọnụ ọchị n'ọnụ ya, otu o si eji ndị ezinaụlọ ya eme ụdị ome ụlọ ọ bụla. Ọ maara mgbe niile na ọ chọrọ ịrara onwe ya nye ụwa sinima na ọ bụ ya dugara ya na Los Angeles. Eziokwu ahụ bụ na a nabataghị ya na mahadum ebe ọ chọrọ ịmụ akwụkwọ emeghị ka ọ daa mbà na ihe mgbaru ọsọ ya.
Na vidiyo ya anyị nwere ike ịhụ na Zach anaghị ebi na obi nke mecca nke sinimaEbe ọ bụ na ihe nkiri ahụ na-ewere ọnọdụ na ebe obibi na mpụga obodo ahụ: "Achọrọ m ịkwaga na gburugburu ebe obibi, n'ụlọ nke vidiyo ndị anyị gbagburu ga-aka mma," Zach King na-akọwa. Na nke a bụ kpọmkwem otu igodo maka ịga nke ọma nke eze nke Final Cut, mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ. King na - arụ ọrụ na otu ndị mmadụ anọ na - enyere ya aka na eserese niile: site na ịkọpụta echiche, na ịmepụta akụkọ akụkọ, na-aga site na iwu ihe eji eme ihe ma na-ejedebe usoro ike ọrụ nke idezi na ịhazigharị mmetụta pụrụ iche.
Vidio ndị a nwere ike ịbụ ihe dị ka sekọnd 15 ogologo oge ụfọdụ, mana eziokwu bụ na mmepụta nwere ike ịdịru ruo ọtụtụ ụbọchị. Zach King kwupụtara na oge ụfọdụ vidio ndị a gụnyere ihe karịrị 50. Nke a bụ otu n'ime ha:
Fọrọ nke nta ka ụgbọ oloko gị kwụsị.
Vidiyo nke Zach King zitere (@zachking) na Ọkt 14, 2014 na 5: 51pm PDT
Na vidiyo dị ka nke a, ndị otu Zach King ga-edezi nke ọ bụla n'ime okpokolo agba ahụ ka anwansi ahụ a tụrụ atụ na-enwe uche na onye na-ekiri ya enweghị ike ịghọta aghụghọ nke mbipụta ahụ. Eziokwu ọzọ dị omimi nke anyị chọpụtara bụ na a na-edegharịkwa ụda olu niile na vidiyo na ntinye akwụkwọ, nke mere na ụda ụda ahụ zuru oke. Fọdụ n'ime ihe ndekọ ndị a jikọtara nsonaazụ ụda nke edere na ihe kachasị dị adị. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere vidiyo anyị gosipụtara, ụda anyị nụrụ mgbe Zach King gafere n'ọnụ ụzọ ka Kin n'onwe ya dekọrọ.g na-akụda n'ọnụ ụzọ mbuli elu na nkwari akụ ha na-anọ na ya.
Kedu ebe kachasị amasị Zach King iji dezie vidiyo ya? Vine kpakpando ahụ na-egosi anyị foto na-atọ ọchị nke ọ na-asa ahụ na laptọọpụ aka ya. Ọchị adịghị, ụkọ ihe dị mkpa iji dọta nde ndị Fans gburugburu ụwa. N’ime vidio ya ụfọdụ, anyị ahụla ka ya na ndị na-eso ụzọ ya na-emekọrịta ihe n’akụkụ dị iche iche nke ụwa.
Obi dị m ezigbo ụtọ izute @zachking, ọkacha mmasị m na-elekọta mmadụ mgbasa ozi kpakpando! #TTTLA ga-ebi ya na Periscope
Foto nke Pablo Ortega dere (@paullenk) na Jun 30, 2015 na 11: 50am PDT
Anyị na-ekwusi ike, na ọtụtụ n'ime vidio ya dị naanị sekọnd ole na ole n'ogologo, mana mgbe ụfọdụ, ndị na-emepụta ihe anaghị akwụ ụgwọ mmefu iji mepụta anwansi a. Na ụfọdụ "n'azụ Mpaghara" gbaa na Zach King na-egosi anyị na anyị nwere ike ịhụ etu oge ụfọdụ cranes na-eji (yabụ ị nwere ike ifegharị gburugburu usoro). N'oge ndị ọzọ, a na-ewepụta ezigbo ọdachi ezinụlọ. N’otu n’ime ihe ọghọm ndị a, ndị otu ahụ gbapụrụ aka mgbe tankị azụ gbariri wee rikpuo ụlọ ebe ha na-ese ihe nkiri. "Anyị ka na-agbake site na mmebi anyị mebiri na ala," ka njakịrị King.
Osisi Vine ọzọ na-atọ ụtọ bụ nke anyị na-ahụ Eze ka ọ na-aga n'akụkụ isi iyi ya na mberede, ọ na-ejide jaket ya n'onwe ya wee kwado ya tupu ọ daba na mmiri. Zach King na-egosi anyị otu oge ịse nke nwere ike iyi ihe dị mfe na ọ bụghị. N'ezie, clip a na-efu ya ọtụtụ eweN'ihi na ọ na-esiri ya ike idozi nguzo ya ma ọ daba na isi mmiri ahụ ọtụtụ oge.
Na-ejide onwe gị site na ọdịda. ? Kpoo ndị enyi 2 na-elele ekwentị ha mgbe niile.
Vidiyo nke Zach King zitere (@zachking) na Jan 3, 2015 na 8: 55am PST
Bụ onye a ma ama na netwọkụ mmekọrịta na-akpa àgwà ọma na nwa okorobịa a na-eme ihe nkiri, onye na-eme n'ọdịnihu anaghị achịkwa ịbanye na ihe nkiri. Nke a bụ nsogbu gị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Zach King, eze nke Instagram na Vine, na-ekpughe ihe nzuzo ya kacha mma
Ọkwa U Ikuku Bluetooth Ikuku, Samsung si multifunction ekweisi
Spotify, Egwu Apple, Tidal na Google Play Music tinye isi